Yakha Izikweletu Zakho Zobumbano - Iphrofayili Yesikweletu ye-Equifax
Uzofakwa ohlwini lwe-Equifax uma ibhizinisi lakho linomugqa wesikweletu ovela ebhange noma emakhadini esikweletu akhishwe ebhange. Iphrofayela yakho yesikweletu enobumbano ne-Equifax ayitholakali nganoma yisiphi isikhathi njengoba sathola i-D&B ne-Experian, kepha ungathola ulwazi oludingayo, lapho uludinga.
Ukuthola Umbiko Wokuthenga Ngezimali we-Equifax
Kunezindlela eziningi zokuthola umbiko wakho wesikweletu webhizinisi kusuka ku-Equifax:
Lapho Umuntu Obolekayo Afuna Umbiko - I-Equifax izonikezela ngombiko kumbolekisi kuphela ogunyaza, ukuze wazi ukuthi ngubani othola imininingwane yakho. Lapho unikeza noma iyiphi inhlangano ukufinyelela olwazini lwakho lwebhizinisi le-Equifax lesikweletu, ungacela ikhophi lakho ngaleso sikhathi ngokubhalela i-Equifax ngale ndlela elandelayo:
I-PO Box 740249
I-Atlanta, GA 30374-0249
Uma Izikweletu Zenqatshelwe Ngokusekelwe Olwazini lwe-Equifax - Uma wenqatshelwe isikweletu sebhizinisi ngokususelwa kumbiko wesikweletu we-Equifax wenkampani, unezinsuku ezingama-60 zokushayela i-1-800-727-8495 noma ucele ikhophi ngeposi kusuka ku-Equifax.
Landa i-Microsoft Office Accounting 2008 - Ungakwazi landa ikhophi EMAHHALA ye-Microsoft Office Accounting 2008 futhi nokuthi uyakwazi ukuthola ikhophi lamahhala le-1 yombiko wakho wesikweletu webhizinisi we-Equifax.
Khumbula ukuthi asikho isizathu sokuthola umbiko we-Equifax uze wazi ukuthi ubakweleta ubika futhi usungule iphrofayili yesikweletu yenkampani. Ukuba nombiko wesikweletu webhizinisi we-Equifax ongenalutho akwenzeli okuhle.
>> Qhubekela Esinyathelweni Esilandelayo ekwakheni Izikweletu Zobumbano - Ukuqonda Ukuthola Izikweletu Kwebhizinisi >>